Taariikhda astaanta Amazon | Hal-abuurka khadka tooska ah
Taariikhda astaanta Amazon
Abuuritaanka iyo naqshadeynta astaanta laguma abuurin hal maalin gudaheed. Waxay ka kooban yihiin hal-abuur dheer oo geeddi-socod ah, kaas oo dhammaan arrimaha ay tahay in la tixgeliyo. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in naqshadeynta ama dib u habeynta calaamad, xitaa faahfaahinta ugu yar ayaa la tixgeliyaa. Tusaalaha cad ee tan waa: Amazon.
Shirkadda Maraykanka ee e-commerce ayaa beddeshay calaamadeeda marar badan, ilaa ay ka gaadhay midda aynu maanta naqaanno. Amazon waxay awooday inay la qabsato isbeddelada iyo falsafada sumadda, oo leh calaamadda la aqoonsan karo. Waana taas, mararka qaarkood lagama maarmaan ma aha in la haysto calaamad adag. Amazon waa tusaale cad oo muhiim u ah la qabsiga sumaddaada oo ku saleysan dhacdooyinka. Halkan waxaan kuugu sheegaynaa taariikhda iyo macnaha calaamadda Amazon, ilaa aan ka gaarno midka ay hadda leedahay.
1 Taariikhda iyo macnaha astaanta Amazon
1.1 Año 1995
1.2 Año 1997
1.3 Año 1998
2 qiimaha astaanta
Taariikhda iyo macnaha astaanta Amazon
Amazon waxaa loo sameeyay goob lagu iibiyo buugaagta, iyadoo ganacsigan ay dhalatay calaamadii ugu horreysay ee shirkadda. Markii la sameeyay astaanta Amazon, Jeff Bezos waxa uu rabey in ay noqoto mid aad u yar oo hoos imanaysa ilaalinta miisaaniyada. Sida muuqata, dhaqaaqa ayaa si fiican u dhacay oo aan saameyn ku yeelan aqoonsiga astaanta, oo hadda laga aqoonsan yahay meeraha oo dhan. Astaanta asalka ah ee shirkadda waxaa sameeyay Turner Duckworth sanadkii 1995. Astaantu waxay ka koobnayd xarafka "A" oo ay Amazon ka hoosayso farta sans-serif-madow. Dhanka kale, qaabka webiga Amazon wuxuu u qaybiyay xarafka "A". Saamayntan dejineed waxay rabeen inay muujiyaan dukaanka.
Laba sano ka dib, calaamadii ugu horeysay ayaa dib loo naqshadeeyay. Waxay ku dareen xariiqyo toosan oo u soo baxay qaab dib u abuurmay webiga Amazon. Qaabkan cusub, calaamaddu waxay u ekayd geed. Astaantu wali ma lahayn midab. Dhanka astaanta, way yaraatay.
Ma ahayn ilaa 1998-kii in Amazon ay bilowday inay si xad dhaaf ah u koraan. Alaab cusub ayaa lagu daray dukaanka, sida buugaagta iyo muusiga iyo kuwa kale. Beddelka astaanta ayaa rabey inuu ka tarjumayo soo jeedinta alaabta. Saddex calaamadood oo kala duwan ayaa la sameeyay. Ugu horrayn, waxa uu si fudud u saaray calaamadda webiga Amazon oo uu kaga tagay calaamadda wejiga nooceedu yahay serif, isaga oo noqday astaanta, waxa aanu ku daray hal-ku-dheg kale oo ah “Dukaanka Buugaagta ee Dunida ugu weyn”. Summadani ma ay sii waarin, waxa lagu beddelay nooc ka kooban midab cusub: huruud.
Hadda xarfaha calaamaddu waxay noqdeen kuwa waaweyn, xarafka "O"na wuxuu ahaa jaalle. Astaantii ayaa mar kale meesha ka baxday. Nooca ugu dambeeyay, waxaan ku arki karnaa calaamad ka yar oo casri ah, oo leh magaca astaanta "Amazon.com" iyo xariiq huruud ah oo ka hooseeya. Xariiqdani waxa ay lahayd qalooc yar oo sare ah. Iyadoo line this waxay rabeen inay matalaan fikradda buundada, isku xirka wixii la soo dhaafay iyo mustaqbalka.
Astaanta Amazon sida loo yaqaan waxaa la sameeyay in ka badan 20 sano ka hor. Waxay ku dhamaatay inay noqoto astaanta shirkadda cusub. Hadda, summada waxay ka kooban tahay calaamadda "Amazon", oo ku dhacda xarfo yaryar. Weli waxaad arkaysaa xariiq jaale ah, laakiin markan qaabka falaarta. Taasi waxay ku biirtaa xarfaha "A" iyo "Z". Doorashada midabada waxay la socotaa fallaadha qaabka dhoola cadeynta, taas oo sii xoojinaysa aqoonsiga dhalinyarada iyo kuwa togan ee astaanta.
Astaanta aynu maanta wada ognahay waxa la nashqadeeyey sannadkii 2000, waxaanay calaamad u noqotay jiilka cusub iyo horumarka tignoolajiyada. Naqshadaynta waxaa doortay goobta ugu weyn ee e-commerce, taasoo ka tarjumaysa habkeeda wanaagsan iyo horumarka.
Weli, Jeff Bezos wuxuu ka walaacsanaa kharashyada baakadaha. Wuxuu door biday inuu ku badbaado naqshadaynta walxaha kale. Markaa Duckworth waxay dooratay inay isticmaasho dhoola cadeynta kaliya si ay u aqoonsato sanduuqyada rarida. Abuuritaanka sanduuqyo dhoolla-caddayn ah, kuwaas oo iyaguna u shaqaynayay sidii xeelad suuqgeyneed.
Tafsiir Bezos wuxuu siinayaa calaamadiisa, Waxay ku xidhan tahay noocyada kala duwan ee badeecadaha ee uu doonayay in bakhaarkiisu wakhtigaas haysto. Sababtaas awgeed calaamaddu waxay leedahay fallaadho ka bilaabma xarafka "A" oo ku dhammaada "Z". Falaadhkaas fudud waxa uu isku xidhay dhammaan badeecooyinka lagu iibiyo Amazon. Hadii aad si fiican u eegto waxa aad arkaysaa in taariikhdu ay u qaabaysan tahay dhoola cadeynta.
Dhinaca far-qorista ee Amazon, waxa la odhan karaa ma aha mid aad halis u ah ama mid caadi ah, waa barta dhexe. Marka la eego doorashada midabka madow, orange iyo caddaan, waxaan dhihi karnaa in madow ayaa la doortay iyada oo ujeedadu tahay in la gudbiyo sareynta iyo xakamaynta suuqa tafaariiqda. Orange wuxuu ku daraa tamar iyo farxad, iyadoo midab madow ku daraysa oo ka dhigaysa mid aan sidaas u sii darnayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Taariikhda astaanta Amazon
Sida loo sameeyo daboolka majaladda hal-abuurka leh
Sida loo abuuro emoji sawirka